ဂျယ်ဂျူးကျွန်းမှလွဲ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖုန်မှုန့်အန္တရာယ် အရေးပေါ်ကြေညာချက် တောင်ကိုရီးယာ?? - Yangon Media Group
ဆိုးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ – တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝန်း တွင် ဖုန်မှုန့်များ သုံးရက်ဆက်တိုက် ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် အစိုးရက ဂျယ်ဂျူးကျွန်းမှ လွဲ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖုန်မှုန့် အန္တရာယ်အရေးပေါ်သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် ဖုန်မှုန့်လွှမ်းခြုံနေသည့် အဆင့်မှာ နေ့ပိုင်းတွင် ဂျယ်ဂျူးကျွန်း နှင့် ဂန်ဝမ်ပြည်နယ်မှလွဲ၍ ဆိုးရွား အဆင့်(သို့) အလွန်ဆိုးရွားအဆင့် သို့ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် အမှုန် လျှော့ချရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင် ရာ အထူးအက်ဥပဒေအရ အစိုးရ သည် အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ် ပြန်ချိန်တွင် စက်ရုံနှင့် မော်တော် ယာဉ်လုပ်ငန်းများကို ကန့်သတ်နိုင် သည်။ ဆိုးလ်မြို့တော်တွင် လူနာ တင်ယာဉ်များ၊ ရဲကားများ၊ မသန် စွမ်းများပိုင်ဆိုင်သော ကားများ၊ လျှပ် စစ်ကားနှင့် ဟိုက်ဒြိုဂျင်စွမ်းအင် သုံးကားများကဲ့သို့သော ယာဉ်များ မှလွဲ၍ မြို့တစ်ခွင်တွင် ၂ ဒသမ ၅ တန်အထက် ဒီဇယ်မော်တော် ယာဉ်ဟောင်းများကို တားမြစ်ထား သည်။ ယင်းကန့်သတ်ချက်ကို ကျူး လွန်ချိုးဖောက်မောင်းနှင်သော ယာဉ်မောင်းများသည် ဝမ်တစ်သိန်း ဒဏ်တပ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရဝန်ထမ်းများအနေ ဖြင့်လည်း မ နံပါတ်ဖြင့်ဆုံးသော လိုင်စင်ပလိတ်ပြားရှိသည့် ကားများ ကို အိမ်တွင်ထားခဲ့ရန် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများရှိ ကားပါကင် ၄၃၄ ခုကိုလည်း ပိတ် ထားသည်။ အရေးပေါ်သတ်မှတ် ချက်များ အာဏာသက်ရောက် ချိန်တွင် ရုပ်ြ<ွကင်းလောင်စာများ ကို လောင်ကျွမ်းစေသော ဓာတ် အားပေးစက်ရုံများအနေဖြင့် ပုံမှန် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုမှ ၈ဝ ရာခိုင် နှုန်းကိုလျှော့ချရမည်ဖြစ်ပြီး လေထု ညစ်ညမ်းမှု ပမာဏများစွာ ထုတ် လုပ်သော စက်ရုံများသည် ထုတ် လွှတ်မှုများကို လျှော့ချရန် အရေး ယူလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင် ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခုသီတင်း ပတ်ကုန်ပိုင်းအထိ အမှုန်များ ဆက် လက်ရှိနေဦးမည်ဟု ခန့်မှန်းထား သည်။
မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုကို လျှော့ချခဲ့ပါက အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှုများကိ??
ဂျပန်နိုင်ငံသားများနည်းတူ လစာနှင့်အခွင့်အရေးများ ရရှိမည့် မြန်မာအထူး ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမ??
လေဆိပ် လဝကဝန်ထမ်းများ ခရီးသည်များအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးရန်နှင့် အဂတိတရားကင်းရှင်းရန် လဝကဝန်ကြီးတွေ့ဆုံသတိပေး